Cilmi-baadhis Sheegtay in Muuqaalka Wejiga Qofku Saamayn ku Yeesho Aragtida Dadka Kale ka Qataan Shaqsiyaddiisa | Maankaab.com
Cilmi-baadhis Sheegtay in Muuqaalka Wejiga Qofku Saamayn ku Yeesho Aragtida Dadka Kale ka Qataan Shaqsiyaddiisa
New York (MNK/W.Wararka)- Muuqaalka wejigaagu wuxuu saameeyaa fikirka dadka kale ka qaataan, kuwaasoo ka go’aan gaadha marka ay ku arkeen sida shaqsiyadadadu tahay sida lagu ogaaday cilmi-baadhis cusub oo ay soo saareen khubaro ka u dhashay dalka Ingiriiska, kana tirsan Jaamacadda New York.
Daraasad tan ka horreysay ayaa lagu tilmaamay in dadka wejiyadoodu sida V amma saddex-geeska u samaysan yihiin, afkana u weyn ay yihiin qaar la aamini karo oo daacad ah, halka cilmi-baadhistan cusub sheegtay in baadhayaasha iyo dadkuba ka qiimeeyaan dambiilayaasha wejiga.
Macluumaad laga helay daraasad laga qaaday 609 qof oo internetka laga waraystay oo dhammaantood khibrad shaqo leh, ayaa laga codsaday in ay u codeeyaan qofka shaqaalaha ah ee la dhimayo amma gunnadiisa hoos loo dhigayo, waxana la soo hordhigay sawirro Madax shirkadeed, iyagoo ku go’aan qaatay muuqaalka qofka oo dadka qaar u arkeen in wejigoodu daacad u egyahay, halka kuwo kalena ay u arkeen in ay yihiin khiyaamoolayaal.
“Qiimaynta afka laga sameeyey iyo maskaxdaba waxay caddayn u noqotay in bina’aadamku ku qiimeeyaan hadba wejigoodu sida uu u kala egyahay, saddex daraasadood oo laga sameeyeyna waxay soo bandhigeen in dadku marka ay qofka arkaan aragti ka qaataan wejigiisa oo ku qiimeeyaan,” ayaa lagu yidhi cilmi-baadhistan.
Khubaro cilmi-nafsiga ku takhasusay oo ka tirsan Jaamacadda New York, ayaa ogaaday in qayb maskaxda ka mid ah go’aamiso aaminaadda qofka, ka hor xataa inta aannu ogaan cidda uu yahay shaqsiga uu la kulmay, waxaanay sheegeen inay maskaxda daqiiqado ku qaadato go’aaminta cidda qofku aaminayo.
Cilmi-baadhistan oo habeenkii Salaasada lagu daabacay wargeyska Neuroscience, waxa lagu soo bandhigay in maskaxdeenu qofka ay welwel ka muujiso aanay aaminin.
“Daarasadayadu waxay soo jeedisay in maskaxdu si degdeg ah uga jawaabto in ay aaminto qofka marka indhuhu arkaan muuqaalka wejigiisa.” Sidaa waxa yidhi Jonathan Freeman oo ah khabiir ka tirsan Jaamacadda New York.